6-80KVA okuphansi Frequency Online UPS (3: 3)
Uranus Series okuphansi Frequency Online UPS isisebenzisa lokhu ubuchwepheshe, okuyinto kuhlangene eziphambili kakhulu DSP digital isilawuli technology emhlabeni njengamanje, futhi IGBT imvamisa high Pulse Ububanzi Ukushintshashintsha amasu (PWM) .Double-ukuguqulwa intanethi yomphindwa design kwenza imvamisa okukhiphayo UPS, okuyinto esetshenziselwa kokulandela, isigaba-ukukhiya, voltage Regulator kanye nokuhluza umsindo, nokugxambukela iyehla iyenyuka amandla igridi okumsulwa sine amandla wave ukuthengisela, futhi wenze-UPS oluningiliziwe futhi ngokuphelele Ukuvikelwa users. Ngemva Prostar R & D isikhungo elaborative eyenzelwe ezingaphezu kwezingu-10 yeas, Prostar aklame isakhiwo Modular, ukusebenza kabani jikelele ukusebenza izikhathi 5 kunokwethenjelwa futhi uzinze kuka-UPS njalo, MTBF iphelile amahora 300,000.
Uranus Series okuphansi Frequency Online UPS ifakwe ejwayelekile esakhelwe okukhipha ngabodwa Transformers, static dlula inkinobho futhi inhlukano silondoloze switch, okwenza lolu chungechunge UPS sinesikhundla eliphezulu kakhulu ukuba bahlanganyele isekhethi. It ingasetshenziswa imvelo esibi kunazo zonke. Futhi-ke has ephelele function.Moreover vikela, it has AC okokufaka, phezu yamandla aphindeke kabili, ngaphansi yamandla aphindeke kabili, okukhipha phezu yamandla aphindeke kabili, okufutshane Ukuvikelwa wesifunda, inverter, rectifier phezu-lokushisa Ukuvikelwa, voltage ngaphansi yamandla aphindeke kabili isixwayiso, ibhethri phezu Ukuvikelwa ukushaja nezinye izivikelo kwelinye, ukuqinisekisa ukusebenza uhlelo stably futhi enokwethenjelwa.
Uranus Series okuphansi Frequency Online UPS kuhlanganisa 3-isigaba ukungena 3-isigaba nasemigwaqweni kusukela HT6K-HT400K, okungaba parallel amayunithi 8 UPS ngqo, ukuba sizikhandle futhi ngokushesha. nezimo ubuchwepheshe umfuziselo ozofakwa imithwalo ezahlukene kanye systems.According izidingo zamakhasimende 'bakha, singaba N +1 noma N + X ukwakhiwa, kodwa futhi ngokuvumelana nezidingo ezahlukene amakhasimende umthamo ezahlukene, kungenzeka ukuthi zifana ne okungahleliwe 8 amayunithi UPS, futhi wonke umthwalo uzolayishwa yibo bonke amayunithi 8 UPS averagely parallel UPS eziphindaphindekayo uhlelo. Noma yimuphi UPS parallel ohlelweni eziphindaphindekayo ukuthi liphele, UPS kuzowabela komthwalo wayo ngokushesha, ukuqinisekisa uhlelo egijima ngokujwayelekile. Phakathi nenqubo ye-UPS parallel, awusebenzi ukusetha aphethe kanye eceleni eyodwa, kodwa sikhethwe amakhasimende kalula. Eyokuqala kuvuliwe UPS ngokuzenzakalelayo isethwe ukuba umninikhaya, lapho uhlelo aphethe kuhlulekile, ubunikazi aphethe ngokushesha komunye UPS, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ngogesi amaklayenti phakathi kwenqubo usebenzisa, ngakho-ke kungase kube yiqiniso uninterruptible ugesi.
1) DSP digital isilawuli technology
uhlelo Core isebenzisa eziphambili kakhulu zonke-digital ukulawula DSP ubuchwepheshe emhlabeni, okuyinto kungaqinisekisa ngempumelelo uhlelo umongo UPS 'olunembile, futhi umcucuzo okusheshayo.
2) Advanced IGBT inverter ubuchwepheshe
Kuhlanganiswe ephezulu onokwethenjelwa futhi high-ukusebenza kahle IGBT inverter nobuchwepheshe ephezulu imvamisa Pulse Ububanzi Ukushintshashintsha ubuchwepheshe (PWM).
Kungaba kungehlisa umsindo womhlabathi lezitshengiselo amandla ukulahlekelwa, ukuthi siqinisekise ukuthi abasebenzisi kungaba ukulayisha ezihlukahlukene ezimweni ukusebenza futhi bathole eliphezulu voltage okukhiphayo futhi cost-ukusebenza, kodwa benza kahle okufakwayo ezingaphezu kuka-95%.
3) Pure-inthanethi double ukuguqulwa ubuchwepheshe
Esinokwethenjelwa oqine, ngemva elicwengekileyo futhi kulawulwa, okukhiphayo wave sine kusukela okumsulwa-inthanethi double ukuguqulwa ubuchwepheshe, akukhona nje kuphela ukuthi asemkhathini ukuphazamiseka ukucindezelwa lemifanekiso, kodwa futhi ne standard okukhipha ngabodwa Transformers, dlula static, yesondlo dlula, senze lo mkhiqizo nge ikhono ngaphezulu ukuze bahlanganyele iDemo wesifunda yamanje. Futhi singasebenza ngokuthi babi zokusebenza imvelo.
4) Ukuvikelwa Perfect
Ukuvikela okuqiniswe uhlelo imisebenzi: It has AC phezu yamandla aphindeke kabili, ngaphansi yamandla aphindeke kabili, okukhipha phezu yamandla aphindeke kabili, ngaphansi yamandla aphindeke kabili, okukhipha sindisa, okufutshane Ukuvikelwa wesifunda, inverter, rectifier phezu-lokushisa Ukuvikelwa, voltage ngaphansi yamandla aphindeke kabili isixwayiso, ibhethri phezu ukushaja Ukuvikelwa nezinye izivikelo kwelinye ukuqinisekisa uhlelo ukuqhuba stably futhi enokwethenjelwa.
5) Inamandla Redundant Parallel Connection Umsebenzi
design okuqinile onokwethenjelwa zezimboni-hlobo isakhiwo Modular, kuhlangene ngokugcwele digital ukulawula DSP uhlelo ubuchwepheshe core, senze lo mkhiqizo hhayi kuphela ingasetshenziswa N +1 / N + X komsebenzi kanye ikhono khulisa amandla, kodwa futhi uvumela amandla ezahlukene kanye nezikhathi ezahlukene UPS kungaba ngokulinganisa. It ziyancipha kakhulu izindleko yomsebenzisi zangaphambi nangemuva wokuthenga, anda umthamo izindleko, kodwa futhi lanwetshwa izikhala eliphezulu okwandayo umthamo.
6) Inamandla uhlelo lokuxhumana
Izinga ifakwe RS232 esibonakalayo, ukwenza contact udlulisela, kudivayisi eziphuthumayo usuke EPO okokufaka esibonakalayo.
7) yamandla aphansi ukushabalalisa kodwa high-ukusebenza kahle
Ukufeza ezingaphezu kuka-98% kahle ultra-high ngaphansi ECO imodeli kwezomnotho, okuyinto kungaletha ngempumelelo phansi inani ugesi, futhi ngempumelelo ngokuhambisana nezidingo target energy esisindisa we ezweni.
8) uhlelo Ukubikezela isixwayiso
LCD iphaneli ukuthola othomathikhi umsebenzi futhi sixwayiso esasifike ngesikhathi kusengaphambili, umsebenzi ukuqalisa self-ukuxilongwa. Kungaba agweme ingozi ezifihliwe ngesikhathi ngenxa yokuhluleka UPS ', labo ababebanga ukuba izingozi. Futhi kungenzeka ngokuzenzakalela alamu ngekubeka khulula battery kokubekwe eceleni isikhathi esingaphansi value set.
9) iphaneli humanized isibonisi
humanized izilungiselelo iphaneli, abasebenzisi Ungasetha uhlelo imingcele, usuku, okukhipha voltage, umthamo webhethri, umsebenzi alamu, ukukhanya-umthwalo ukuvala shaqa, uhlelo qalisa sikhathi, izilungiselelo imodemu, ezifana oda, futhi kungaba kuze kufinyelele 120 Imininingwane normal ukwehluleka kubasebenzisi ukubuza.
10) I-Super-eqinile imvelo nezimo
Lo mkhiqizo has esiphakeme nezimo zemvelo, ububanzi ububanzi AC okokufaka, kakhulu kunciphisa imvamisa ibhethri usebenzisa, luqhubeke ngempumelelo impilo yebhethri.
11) Linamandla Ngokweqile Amandla
Ukusebenzisa okumsulwa-inthanethi double ukuguqulwa ubuchwepheshe, ne okukhipha ngabodwa Transformers, dlula static, kanye nokugcinwa dlula.
Inverter Ngokweqile Amandla safinyelela 110% / 125% / 150% nokulayishwa isikhathi ingahlala 300min / 10min / 1min.
Dula Ngokweqile Amandla safinyelela 150% / 170% / 250% ngokweqile isikhathi ingahlala 60min / 10min / 1min.
HT6K-HT30K (-ins amathathu kanye nasemigwaqweni ezintathu)
Umthamo (VA / W)
48 ~ 54dB (Ibanga 1m)
53 ~ 60dB (Ibanga 1m)
HT40K-HT80K (-ins amathathu kanye nasemigwaqweni ezintathu)
53 ~ 62dB (Ibanga 1m)
3 izigaba 4 izintambo futhi phansi, 380V ± 25%
3 izigaba 4 izintambo, 380V ± 1%
50Hz / 60Hz ± 0.05% (ngu yebhethri)
Layisha Linear <3%, Layisha Non-eqondile <5%
Balance umthwalo = 1%, ukungalingani umthwalo = 3%
Isigaba engela shif
Balance umthwalo = 1 °, ukungalingani umthwalo = 2 °
Lokukhipha at 0 ~ 50% ~ 100% ≤5%, impendulo ≤ 10ms
Pure wave sine
Ukushaja isikhathi (Standard)
Wokufaka phezu yamandla aphindeke kabili, ngaphansi yamandla aphindeke kabili; okukhipha sindisa, shortcircuit; Inverter phezu-lokushisa; Ibhethri ngaphansi yamandla aphindeke kabili, phezu yamandla aphindeke kabili
Running lokushisa & Umswakama
0 ℃ -40 ℃ degree Celsius, Ngaphansi kuka-95% (ngaphandle ushintsha uba yileli)
<1000m (ngokwanda ka 100m, kuyonciphisa okukhipha 1%) max 4000m
contact Dry (low ibhetri ukudedela ibhethri, bapass / iphutha), EPO
EPO futhi dlula
IP20 (phambili umnyango ovulekile)
N +1, N + X, kungaba parallel differenct amandla umthamo
Windows9x, 2000, NT, ME, XP, i-Linux, u-Novell, Macosx, NT4.0
Phakathi naleso sikhathi phakathi ukwehluleka
Dustproof & dampproof, Ukuzihlukanisa inverter transformer, umbani yokwanda ukumuncwa, ukushintshwa static, manual maintainence switch
lwezezimali Futhi Securities
leposi Futhi Telecommunications
Industrial Futhi Commercial intela indaba
Esibanzi Inthanethi Ikhompyutha Igumbi
Energy Futhi Ugesi
Uranus Series okuphansi Frequency Online UPS 6KVA-400KVA
Previous: 100-400KVA okuphansi Frequency UPS (3: 3) esilandelayo:90KVA Modular UPS (30U)
100-400KVA okuphansi Frequency UPS (3: 3)